Ampidino Clever Dictionary ho an'ny Windows
Ampidino Clever Dictionary
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (68.37 MB)
Ampidino Clever Dictionary, Aminny alàlanny rindranasa Clever Dictionary, azonao atao ny mikaroka ireo vaovao tadiavinao aminny loharano tsara. Navoaka ho programa maimaimpoana izay azonao ampiasaina mandritra ny fanaovana fampahalalana na fikarohana data aminny solosainanao ny fampiharana ny diksionera Clever Dictionary izay manambara ny valinny fampahalalana tadiavina avy aminny loharano maro. Na dia tsy dia manintona sy tsara endrika aza ilay interface, azoko atao ny milaza fa manao ilay asa izy ary manao ilay asa tokony hataony.
Satria ny loharanom-pikarohana ao aminilay fampiharana dia fantatra aminny famokarana atiny misy kalitao manerantany, tsy mandeha ny valiny aminny valiny tsy misy ifandraisany na ratsy kalitao toa ny karoka Google. Mifanohitra aminizany aza, azonao ny fampahalalana voarakitra ao aminireo loharanom-pahalalana fanta-daza ireo. Anisanizany ny Wikipedia, Fine Dictionary,Koa satria tafiditra ao ny Mobysaurus sy ny maro hafa, mino aho fa ho tianao izany rehefa mampiasa azy.
Ho fanampinizany, azo atao ny mahazo valiny aminny alàlanny fikarohana aminny sokajy teny maro samihafa toa ny synonyme, antonym, synonyme, teny manokana. Mazava ho azy, ny diksionera teny mahazatra dia azo ampiasaina ihany koa. Ny fampiharana, izay mampiasa ny diksionera anglisy nomaninny oniversite, dia manolotra ny fanazavana ny teny anglisy aminny teny anglisy, na dia tsy mandika aminny teny tiorka aza izany.
Tokony ho tadidinao fa tsy maintsy. Aminny fifandraisana 3G, mety handany ny quota-nao aminny tahanny tsy ilaina.Noho izany dia manolo-kevitra anao aho mba hitandrina. 21m
Clever Dictionary Specs
Haben'ny rakitra: 68.37 MB
Developer: Lee Powell